Tartankii iibka ee hantida Saldhigga tijaabada ee Yeletsk ee baradhada ayaa la hakiyay - Nidaamka Baradhada
Tartankii iibka ee hantidii musaliftay ee FSUE “Yeletsk Baradho Saldhigga tijaabada” waa la joojiyay, Abireg ayaa soo wariyay.
Sababta "qabow" ee ganacsiga lama yaqaan hadda. Suurtagal ma aheyn in si dhaqsi leh loola xiriiro qabanqaabiyaasha xaraashka - A-Club LLC. Xusuusnow in kharashka bilowga ah ee shirkadda ee xaraashka lagu qiyaasay 648 milyan oo rubi. Qiimaha dhimista sicirka waa 5%, qiimaha goynta waxaa laga dhigay 70% - taasi waa, inta lagu guda jiro xaraashka, hantida shirkada waxay ku dhici kartaa qiimaheeda 453,6 milyan oo rubi. Codsiyada kaqeybgalka waa la aqbalay ilaa Noofambar 9, 2020.
Hantida shirkadda waxaa lagu iibiyaa hal wax badan. Sida ku cad qalabka, waxaa ka mid ah dhisme xafiis, aqoon isweydaarsi nijaarnimo, tas-hiilaad lagu keydiyo baradhada, lo’da, doofaarka, dhisme xafiis, ceelal, taawarada biyaha, xarumo wax lagu beddelo qalabka wax lagu beddelo, garaashyada, xarunta dabdamiska, foojari, bakhaarro iyo goobo kale. Bakhtiga ayaa sidoo kale waxaa ku jira baabuur iska roge ah oo loo yaqaan 'KamAZ truck', gaari KAZ ah iyo gaari rakaab ah oo Lada ah. Qaybta ugu qaalisan ee badan, oo loo qoondeeyay ku dhowaad 600 milyan oo rubi, waxay ka kooban tahay xuquuqda kireynta 27 dhul oo leh wadar guud oo ka badan 5,1 kun hektar. Hantidu waxay ku taalaa golaha tuulada Sokolsky ee degmada Yeletsky ee gobolka Lipetsk.
Dacwadaha Tartanka ee ka dhanka ah FSUE "Yeletsk Saldhigga tijaabada baradhada" waxaa la soo saaray bishii Maajo 2018. Musalafnimada shirkadda waxaa bilaabay OOO Shelf-2000. Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee guddoomiyaha musalafnimada, 138,3 milyan oo rubi ayaa lagu daray diiwaanka sheegashooyinka. Kuwa ka mid ah amaahda idaacada waxaa ka mid ah JSC "Rosselkhozbank", MIFNS oo ka tirsan gobolka Lipetsk, JSC "LESK" iyo kuwo kale.
FSUE "Saldhigga Tijaabada Bataatiga ee Yeletsk" waxaa la diiwaan galiyay 2001, laakiin taariikhda shirkada waxay dib ugu laabanaysaa bilowgii qarnigii la soo dhaafay. Hawsha ugu weyn ee ururku waa tabcashada miraha miraha xididka iyo dhirta tuubada leh oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo ah istaarj ama inulin. Wax soo saarka idaacadda waxaa la geeyay dhowr gobol oo ka tirsan Ruushka. Wakaaladda Federaalka ee dareerayaasha ururada sayniska ayaa ah aasaasihii ugu dambeeyay ee shirkadda. Sida laga soo xigtay Kartoteka.ru, 2018, dakhliga idaacadda wuxuu ahaa 23,8 milyan oo rubi. Khasaaraha Net - 273 kun rub.
Tags: Gobolka Lipetsk